रुपै सत्रु बन्यो | OB Media
रुपै सत्रु बन्यो
Nawaraj Kattle | १८ श्रावण २०७७, आईतवार ०८:३८
बिहानी पख नयाँ जोस, नयाँ सुरुवात मनमा रहेको सपना उमङ्ग ताजा थियो । भोलिका दिनमा केहि गर्ने जोश र जाँगरका साथ लागि पर्ने र आकाश छुने त्यो रंगिन सपना बोकेर हिडेकी उनिलाई कहाँ थाहा थियो उनको रंगिन सपना क्षणिक भरमै तेजाब संगै जलेर जान्छ भनेर । के गल्ति थियो उनको ? के नारी भएर जन्मिनु सराप भयो उन्को लागी ? के जबरजस्तीको प्रेम प्रस्ताव अस्विकार गर्नु भुल थियो उसको या भनौ आफ्नु जिन्दगि बाच्ने हक थिएन उसलाई ?
आगोको रापमा प्लास्टिक पगालिएको झैँ उनको शरिर पग्लिरहेको थियो । उनको त्यो सुन्दर रुप तेजाब संगै जलिरहेको थियो, जुन रुप उनको लागि सत्रु बनेको थियो । उनको रगत भत् भत् उम्लिएझै, त्यो तापले उसको शरिर पोलिरहेको थियो । आमा बुवाको लागि बुनेका ति सपना र आफ्नु भविस्य तेजाब को रागसंगै बगिरहेको थियो । कसैले मायाले छुदाँपनि उनको शरिरलाई सियो ले घोचे झैँ घोचिरहेको थियो । एस्तो ज्यान लिने घटना भएता पनि आफुलाई मर्का पर्ने तर्कहरु प्रष्ट सुन्थिन् उनी। ए प्रेम सम्बन्ध पो रहेछ उनिहरुबीच ? प्रेम अस्वीकार गर्दा पो तेजाब हालेको रहेछ । यी समाजका मासिनको तल्लो सोचले र उनीहरुको तर्कले तेजाबले भन्दा बदी पोलेको छ उसलाई । साँच्चिकै सोचमा प्रश्न गर्ने थाले आफुले आफुलाई, तेजाप प्रेमीले हाल्छ कि अपराधी ले ?
सिमा बस्नेत, संगीता मगरखि लिएर आजका दिनसम्म कयौं नारीहरु तेजाबको शिकार भैसकेका छन् । कानुनी रुपले हेर्नुपर्दा तेजाब प्रहार गर्ने अपराधीलाई ३ देखि १० वर्षको सजाय सुनाए ता पनि कयौ पीडितहरुले आाजै पनि सह्ज रूपमा न्याय पाएका छैनन् । के कामको भो कानुन ? केही गर्दैन जब कुरा आउँछ नारीको । देश कता तिर लाग्दैछ ? साँचिकै के नारीहरु सुरक्षित छन् त ? घटना भैसकेपछि मात्र हामी सबै जना तातिनछम, आफ्नै देश को कानुन देखेर अचम्म लाग्छ, बलात्कारी २ वर्षमा रिहा हुन्छ, तेजाब हान्ने केहि धरौटी दिएर र हद से हद २ वर्षमा रिहा हुन्छ । यहि हो हाम्रो देश को कानुन ? अब उस्तै पीडा पाउनु पर्छ हिंसक अपराधीले, स्वतन्त्र बाच्न पाउनुपर्छ सबै नारीहरुले ।
खोर र सडकबाट दशजनाको उद्धार